ज-जसले आफैलाई मेरो निम्ति अर्पण गर्छ र चढाउँछ, म निश्चय नै तँलाई अन्त्यसम्मै रक्षा गर्नेछु; तँ सधैँ शान्तिमा हुन सक् र सधैँ आनन्दित हुन सक्, र तँसित मेरो ज्योति र प्रकाश हुन सकोस् भनेर मेरो हातले निश्चय नै तँलाई थाम्नेछ। म निश्चय नै तँमाथि मेरा आशिषहरूलाई दोबर वर्षाउनेछु, ताकि मसित जे छ, त्यो तँसित होस् र म जे छु, त्यो तैँले प्राप्त गर्। तँलाई जे दिइएको छ, त्यो तेरो जीवन हो, अनि कसैले त्यसलाई तँबाट खोस्न सक्दैन। आफूलाई समस्यामा नपार् वा निराशामा नपर्; मभित्र शान्ति र आनन्द मात्रै छ। छोरा, तँ जसले मेरो कुरामा ध्यान दिन्छस् र आज्ञा मान्छस्, म तँलाई साँचो रीतिले प्रेम गर्छु। मैले सबैभन्दा घृणा गर्नेहरू भनेका कपटीहरू हुन्; म निश्चय नै तिनीहरूलाई मेटिदिनेछु। म मेरो घरबाट संसारको सानो निशाना पनि हटाइदिनेछु, अनि ती सबै कुराहरूलाई हटाइदिनेछु जसलाई म हेर्न सक्दिनँ।
कसले मलाई साँचो रीतिले चाहन्छ र कसले चाहँदैन भन्‍ने कुरा मलाई मेरो हृदयभित्र ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। तिनीहरूले राम्रोसित भेष बद्लेर परिस्थिति अनुकूल रूप बदले पनि, र तिनीहरू संसारकै उत्कृष्ट अभिनेताहरू हुन् भनेर भन्न सकिए पनि तिनीहरूले आफ्‍नो हृदयमा राखेका कुराहरूलाई सबै स्पष्ट देख्दछु। तेरो हृदयमा के छ मलाई थाहा छैन भनी नसोच्; वास्तवमा मैले जतिको स्पष्ट प्रकारले अरू कसैले बुझ्दैन। तेरो हृदयमा के छ मलाई थाहा हुन्छ; तँ परमेश्‍वरको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्न र परमेश्‍वरको निम्ति समर्पित हुन इच्छुक छस्, यति मात्र हो कि तँ अरूलाई आनन्दित तुल्याउन मीठो कुरा बोल्‍न चाहँदैनस्। स्पष्टसित हेर्! आजको राज्य मानिसको शक्तिद्वारा निर्माण हुँदैन, तर मेरो बहुबुद्धि र मेहनती प्रयासको प्रयोग गरेर नै सफलतापूर्वक निर्माण गरिनेछ। ज-जसले बुद्धि प्राप्त गर्दछन् र म जे छु त्यसलाई आफूभित्र प्राप्त गर्दछन्, तिनीहरू राज्यको निर्माणमा सहभागी हुनेछन्। उप्रान्त चिन्ता नगर्; तैँले तँभित्र आउने मेरो इच्‍छाको प्रकाश वा अन्तर्दृष्टिको कुनै वास्ता नगरी सधैँ अत्याधिक चिन्ता गरिरहन्छस्। अब उपरान्त यसो नगर्। जेसुकै मामला भए पनि, यसको बारेमा मसँग अझै बढी सङ्गति गर्, ताकि तँ तेरो आफ्नै कार्यहरूबाट आउने कष्टबाट बच्न सक्।
सायद, बाहिरबाट हेर्दा, यस्तो लाग्छ मानौं म सबैप्रति उदासीन छु, तर म भित्री रूपमा के सोच्छु, के तँलाई थाहा छ? म सधैँ नम्रहरूलाई उचाली रहन्छु, अनि जो घमन्डी र अभिमानी छन् तिनीहरूलाई सधैँ तल झारिरहेको हुन्छु। मेरो इच्छालाई नबुझ्‍नेहरूले ठूलो हानि भोग्नेछन्। म यस्तो छु, अनि यो नै मेरो स्वभाव हो भनेर तैँले जान्नुपर्छ—कसैले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन अनि कसैले यसलाई पूर्ण रीतिले बुझ्न सक्दैन। केवल मेरो प्रकाशद्वारा मात्रै तैँले यसलाई बुझ्न सक्छस्, नत्र भने तैँले यसलाई पूर्ण रूपले पनि बुझ्‍नेछैनस्; अहङ्कारी नबन्। केही मानिसहरूले राम्रोसित बोल्‍न सके पनि, तिनीहरूको हृदय मप्रति कहिल्यै वफादार हुँदैन, अनि गुप्तमा सधैँ मेरो खण्डन गरिरहेका हुन्छन्; म यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई न्याय गर्नेछु।
अरूबाट सङ्केतहरू लिने कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित नगर्, तैँले मेरो व्यहोरा र मेरो व्यवहारलाई ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रकारले मात्रै तैँले विस्तारै मेरो इच्छालाई बुझ्दै जानेछस्; तब तेरा कार्यहरू मेरो इच्छा अनुरूप हुनेछन्, अनि तैँले कुनै गल्तीहरू गर्नेछैनस्। बिलौना गर्ने वा शोकित हुने काम नगर्; म तैँले गर्ने सबै कुरा, तेरा सबै व्यवहार र तैँले सोच्ने सबै कुरालाई स्पष्ट रूपमा देख्दछु, अनि म तेरो साँचो इच्छा र चाहनाहरूलाई जान्दछु; म तँलाई प्रयोग गर्नेछु। अहिलेको समय महत्त्वपूर्ण समय हो; तँलाई जाँच्ने समय आइपुगेको छ। के तैँले अझै देखेको छैनस्? के तैँले अहिलेसम्म महसुस गरेको छैनस्? म किन तँप्रति यस्तो आचरण राख्छु? के तँलाई थाहा छ? मैले तँलाई यी कुराहरू प्रकट गरेको छु र तँसित थोरै अन्तर्ज्ञान छ। तर, नरोकी—तेरो प्रवेशमा अघि बढ्ने कार्यलाई जारी राख्, अनि म तँलाई लगातार अन्तर्दृष्टि दिइरहनेछु। तैँले जति बढी मेरो आज्ञा मान्छस् र मेरा कुरामा ध्यान दिन्छस्, तँ भित्री रूपमा त्यति नै उज्यालो हुन्छस् र तँभित्र त्यति नै बढी प्रकाश हुन्छ भन्‍ने कुरालाई के तैँले महसुस गरेको छस्? तैँले जति बढी मेरो आज्ञापालन गर्छस् र मेरो कुरामा ध्यान दिन्छस्, तँसित मेरो ज्ञान त्यति नै बढी हुन्छ अनि तैँले त्यति नै धेरै अनुभव प्राप्त गर्छस् भन्‍ने के तँलाई थाहा छ? सधैँ तेरा धारणाहरूमा नै लागिरहने नगर्; यसो गर्दा यसले मेरो जीवित पानीको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्नेछ अनि मेरो इच्छालाई अघि बढाउने कार्यमा बाधा दिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नु सजिलो विषय होइन भनी तैँले जान्नुपर्छ। जटिल विचारहरूमा बहकिएर नजा। केवल पछ्याउने कार्य गर्, अनि धेरै सोचमग्न नबन्!